Muuri News Network » Arrag Sawiro Muujinaya Rafaadka lagu qabo Wadada Wadnaha ee Muqdisho..
Arrag Sawiro Muujinaya Rafaadka lagu qabo Wadada Wadnaha ee Muqdisho..
Dhibaato adag ayeey ku qabaan Bulshada Magaalada Muqdisho iyo gaadiidleyda Isticmaalka wadada wadnaha oo ah wado muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka caasimada Muqdisho.
Xilligan oo ah waqti roobaad, waxaa adag in si nadiif ah wadada ay u maraan gaadiidka, sababtoo ah wadada ayaa ah mid aad u bur bursan oo biyaha roobka ay fariistaan, xilliga roobka uu ka da’o Magaalada Muqdisho.
Gaadiidka uma suuragalayso inay wadada maraan, oo waxa ay maraan gaadiidka Xaafadaha dhexdooda, halkaasina waxa ay ku qabaan dhibaatooyin aanan la soo koobi karin.
Wadada xiriirisa Isgoyska Bakaaraha ilaa Isgoyska Howlwadaag ee Magaalada Muqdisho inta u dhaxeysa ayaa ah mid aad u bur bursan oo gaadiidka aysan mari karin, waana inta ugu daran ee dhibaatada adag lagu qabo.
Cabdiraxmaan Yuusuf waxa uu ka mid yahay darawalada kaxeeya Gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala Wadada Wadnaha waxa uu sharaxayaa dhibaatada ay wadadaan ku qabaan isaga oo sheegaya in ay bixiyaan lacag canshuurta ee dowladdu qaado.
“Waxaan ka shaqeynaa Wadada wadnaha oo bur-bursan waxaan marnaa xaafadaha ka ak dhaw laamiga, mararka qaar waxaa dadka ay naga xirtaan xaafadaha aan mareenno waxaan dowladda ka dalbaneynaa in ay noo hagaajiso wadada ama ay Booyadaha biyaha Dhuuqa ay noo soo dirto” ayuu yiri Darawal Cabdiraxmaan Yuusuf.